Akụkọ - Ego ole ka anyị “na-eri” kwa ụbọchị?
Taa ụwa a na-ahụ nrụrụ plastik siri ike karịa oge ọ bụla. Na elu ugwu nke Everest, 3,900 mita n'okpuru South China Oké Osimiri, n'etiti Arctic ice caps na ọbụna na ala nke Mariana Trench plastic mmetọ dị n'ebe niile.
Na oge nke na-eri ngwa-ngwa, anyị na-eri nri akpọchiri akpọchi plastik, nata ngwugwu n'ime akpa nzipu ozi plastic. Ọbụna a na-etinye nri ngwa ngwa na arịa plastik. Dabere na Global News na nyocha nke Mahadum Victoria mere, ndị ọkà mmụta sayensị achọpụtawo 9 microplastics na ahụ mmadụ na onye okenye nke America nwere ike ilo ihe site na 126 ruo 142 microplasitc ma kuru site na 132 ruo 170 plastic plastic kwa ụbọchị.
Gịnị bụ microplastics?
Onye ọkà mmụta Britain bụ Thompson kọwara ya, microplastic na-ezo aka iberibe plastik na irighiri ihe mpempe ya na-erughị 5 micrometers. 5 micrometers dị ọtụtụ karịa karịa otu ntutu ma ọ bụ ụmụ mmadụ na-ahụ ya.
Ebee ka microplastics si abịa?
Ebe ọ bụ na e mepụtara plastik na narị afọ nke 19, e mepụtala plastik karịrị ijeri tọn 8,3, n'ime ha, ihe karịrị nde tọn 8 na-ejedebe n'oké osimiri kwa afọ n'emeghị nhazi. Nsonaazụ: a chọpụtala microplastics n'ihe karịrị mmiri 114 dị na mmiri.
②Nri nhazi nri
N'oge na-adịbeghị anya, ndị sayensị mere nnyocha sara mbara banyere ụdị mmiri mmiri mmiri 250 n'ime mba 9 wee chọpụta na ọtụtụ mmiri mmiri nwere ha. Ọbụna mmiri pọmpụ nwere microplastics na ya. Dabere na ụlọ ọrụ nyocha nke ndị America, n'etiti mba iri na anọ nke mmiri pọmpụ nọ n'okpuru nyocha a, achọpụtara na 83% n'ime ha nwere microplastics na ya. Ọ bụghị banyere nnyefe na afụ tii na arịa plastik na iko ndị nwere ike ịchụpụ nke anyị na-achọ ịdebe kwa ụbọchị. A na-enwekarị mkpuchi nke Polyethylene nke ga-abanye n'ime obere ahụ.
Nke ahụ enweghị atụ! Ma, o sighị ike nghọta. Nnu si n'oké osimiri nile puta, mb ise etiputara miri, olee otú nnu si di ọcha? Ndị na-eme nchọpụta achọpụtala na microplastics karịrị 550 na nnu mmiri mmiri n'arọ 1 n'arọ.
Ne Ihe Ndị Dị Ezigbo Mkpa Kwa ④bọchị
Otu eziokwu ị nwere ike ịchọpụtabeghị bụ na enwere ike ịmepụta microplastics site na ndụ gị kwa ụbọchị. Dịka ọmụmaatụ, ịsa akwa polyester site na igwe ịsa ahụ nwere ike wepụta ọtụtụ eriri dị mma na akwa akwa. Mgbe eriri ndị ahụ na mmiri nsị, ọ na-aghọ microplastics. Ndị nchọpụta na-eche na n’obodo nke otu nde mmadụ bi, enwere ike ịmepụta otu tọn nke eriri superfine, nke hà nha 150,000 plastic na-adịghị emebi emebi.
Ihe mgbochi nke plastik
Superfine fibers nwere ike ịkwụsị na sel anyị na akụkụ ahụ anyị, nke nwere ike ibute ọrịa siri ike dịka nsị na ọrịa cancer na-adịghị ala ala.
Olee otú anyị ga-esi lụọ ọgụ?
Naturepoly na-agba mbọ mepụta plastik na-agbanwe agbanwe. Anyị etinyewo ego na nyocha na mmepe nke ihe eji arụ ọrụ ebe obibi dịka PLA, okpete. Anyị na-eji ha n'ichepụta ihe ndị dị mkpa dị n'ụlọ dị ka akpa mkpofu, akpa ịzụ ahịa, akpa pọpa, ihe mkpuchi, mkpofu mkpofu, iko, ahịhịa na ọtụtụ ngwaahịa ndị ọzọ na-abịa.